နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှ MPT internet line အကြောင်း — MYSTERY ZILLION
နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှ MPT internet line အကြောင်း
မနေ့က (၅-၇-၂၀၀၉) မှာ MPT ရဲ့ india line လို့ခေါ်တဲ့လိုင်းက gateway, dhcp, proxy ကော အကုန်လုံးကျသွားပါတယ်။ MPT က dhcp server ကနေ ip ပေးတာဖြစ်လို့ တနေကုန် ဘယ်သူမှ ip လည်းမကျ ping လို့လည်းမရကြပါဘူး။ တနိုင်ငံလုံးဖြစ်တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူး။ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က အင်တာနက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ gtalk တွေရနေပါတယ်။ ထူးဆန်းတယ်နော်။ ဘာ ip star မှလည်းမရှိပါဘူး။ အဲဒီမြို့မှာ mpt တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲ နောက်တော့မှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ရန်ကုန် MPT ADSL ဌာနက တစ်ယောက်ရဲ့ အကိုဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပါတဲ့ဗျာ။ ဘယ်သူလဲလို့တော့ လာမပေးနဲ့နော် မပြောပြဘူး သတ်ရင်သတ်ပလိုက်။
အစ်ကိုရေ.. ဒါတွေကဒီမှာလဲရှိနေတာပါပဲ. အားလုံးလဲသိနေပါတယ်. အထူးအထွေတောင်ပြောနေစရာမလိုပါဘူး :d
ဒါပေမဲ့ဗျာ.. Mz မှာနိုင်ငံရေးတွေပါလို့အပိတ်ခံရတယ်ဆိုဘယ်သူမှစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ ့မသင့်တော်ဘူးလို ့ထင်တယ်..
မင်မင်တွေ နဲ ့မော်မော်တွေ ကိုပြောလိုက်လေ..
ygncache5.mpt.net.mm ပြောင်းလိုက်ရင် ရပါလိမ့်မယ်.....
ygncache5 က ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွက်
သူတို့ လိုင်းတွေကို static လိုင်းတွေ
ကျွန်တော်တို့ က dynamic လိုင်း
Thergyi wrote: »
ကျွန်တော်မသိလို ့မေးပါရစေ static လိုင်းနဲ့dynamic လိုင်းတို ့ကဘာကွာသလဲမသိ
ip ကွာပါတယ်။ static က ip ကို manual ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့ internet စသုံးဖို့ login ၀င်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ အပြင်လူတွေကိုမပေးပါဘူး။ ဌာနဆိုင်ရာတွေပဲပေးထားတာပါ။ dynamic က dhcp server က နေ ip ချပေးတာပါ။ ip ကျတာနဲ့ mpt login page မှာ login လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ proxy ကို access လုပ်လို့ရပါတယ်။